UNDERCARRIAGE Vagadziri uye vanotengesa - China UNDERCARRIAGE Fekitori
Mucherechedzo E345 track chinongedzo / chekuchera simbi track cheni, E345 undercarriage simbi mateki maviri
Bonovo inopa zvese zvakajairika track link gungano, rakasimbiswa uye rakazorwa nzira yecheni yevanochera uye mabhurldoz, track track pombi kubva pa90mm kusvika 317mm. Isu takashandisa yepamusoro kupisa kurapwa kuona kuomarara kwetiraki yekubatanidza, iyo pini uye gwenzi zvaipiswa zvakare kupisa kuburikidza neepamusoro degree kudzimwa kuve nechokwadi chekuoma kwakapfeka hupenyu.
Excavator Track Maketani Akanamatira Ungano yeAkiina yeChitani Chinki Volvo Ec 210DL
Excavator spare parts track chinongedzo chain assy undercarriage zvikamu
Dozer zvikamu track chinongedzo / track cheni / chinongedzo assy 41L ye komatsu d155a track chinongedzo d155a-1 / d155a-2
D6D CAT Maketani Bulldozer D6H D6K D6G Simbi Yekutevera Yekutevera Yekutevera Ketani yekutakura kwepasi
Bonovo undercarriage spare zvikamu zve track track ye hitachi ex200-1 track link
Kuburitsa Simbi Yekutenderera Chain Chekanisa Gungano Revhidhi Yekudyidzana kweMini Excavator ex40
OEM yakagadziriswa Yakakwira mwero 330 yekuchera track shangu track track matinji emaketani
Sprocket / Chikamu
Iyo sprocket / chidimbu chinobata nehusingo hwe track track gungano uye inotyaira muchina. Iyo chaiyo kupisa kurapwa kwakakosha kune hupenyu hwakareba uye mukurumari. BONOVO zvikamu uye mapuritsi ari pasi peakawanda emhando cheki panguva yese yekugadzira kuona kuti vanosangana neyakaomeswa maratidziro. Matangi edu anoshanda kune Komatsu, Hitachi, Kobelco, Daewoo, Hyundai, Volvo, Jcb nezvimwe. Tinogona zvakare kupa OEM sevhisi zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli.
Tevera Bolts Uye Nuts
Bonovo inopa dzakasiyana siyana dzeTrack Shoe Bolts & Nuts mune ese masendimita uye metric saizi, aya matema track bolts uye nzungu ndeyekucheka pamucheto unoshandiswa mune akakurumbira mhando.
Rubber Track Pads inopa shanduko iri nyore kubva mukushanda muvhu nematare esimbi kuenda kunoshanda panzvimbo dzakaomarara panofanirwa kuchengetedzwa kana kudhonzwa. Izvo zvinogadzirwa kubva kune yakasimba, yakasimbiswa, yakatemwa-isingagadzirike rabha yekushandisa kwenguva pfupi kana pfupi-pane akasiyana nzvimbo. Dzokera zviri nyore kune track yesimbi kana kudzivirira kusingadiwe. Inokodzera Rubber Mapedhi kune yako simbi yakateedzerwa excavator ndiyo mhinduro kwayo yekushandisa inorema michina mumigwagwa yakapera uye nzvimbo pasina kukuvara kuwedzera yako michina kuita kwakawanda.